iCloud dosen't runtii ku kaydiso fariimaha qoraalka taariikhda / iMessage. Sidaa darteed, sida xogta kale ee iPhone, waxay u baahan tahay in aad database SMS in lagu daro hayaan iCloud. Markaas, waxaad awoodi doontaa in aad u aragto iyo Macdan fariimaha iCloud si la mid ah in ay jiri aad iPhone waqtiga gurmad iCloud waxaa loo isticmaalaa. Si kastaba ha ahaatee, xogta oo la tirtiray ka hor gurmad waxaa laga sameeyey ma noqon doonto la heli karo. iCloud waa in la soo celiyo saddex hayaan ee la soo dhaafay loo sameeyey aad iPhone si cad awoodin, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan xogta maalinta ugu dambeeyay haddii aad u baahan tahay. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro runtii hab fudud si ay u helaan farriimaha qoraalka ah iCloud kaga imaanayo iCloud haddii gurmad dhameystiran la soo celiyo oo ku saabsan qalab iPhone / macruufka si ay u helaan macluumaad kasta. Waayo, kanu, waa in aad masixi telefoonka si buuxda oo u qotomiyey tan iyo bilowgii. Iyadoo samayn, waa in aad gasho in aad xisaabta iCloud oo halkaas ka soo; aad soo celin karaa gurmad ah ku saabsan qalabka iPhone ama macruufka. Waxa aanu run ahaantii ma ahan ka qalab kaas oo, gurmad ay asal ahaan ka yimaadeen. Waxaad soo celin karaa gurmad iCloud on qalab kasta oo macruufka. Tusaale ahaan, soo celinta gurmad iCloud ku saabsan qalabka xiriiri iPod, laakiin sida iPod taabto ma taageeri ma fariimaha qoraalka ah; aad leedahay si aad u isticmaasho iPhone sida iPod.
Qeybta 1: View iyo Soo Celinta fariimaha qoraalka la Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Qeybta 2: Talooyinka taageerto kor u iPhone la iCloud
Qeybta 1: View Macdan Message iCloud la Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Wondershare Dr.Fone waa software ka soo kabashada xogta ugu wanaagsan ee iPhone, iPad, iPod iyo taabashada. Waa xal u soo kabsaday xogta laga badiyay sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, sawiro, qoraalo, iwm Dr.Fone taageertaa soo kabashada xogta labada iCloud iyo gurmad Lugood. Waxaa si buuxda la jaan qaada oo dhan Qalabka macruufka iyo qaybaha kala duwan ee macruufka ah.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka - Download iyo Waraaqda Message iCloud
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa software ka soo kabashada xogta ugu hufan ee aad iPhone, iPad ama iPod. Waxay kaa caawinaysaa inaad hesho oo dhan fariimaha tirtiray, sawiro, xiriirada iyo qoraalada iyo Bookmarks Safari iwm Waxaa xitaa aad ka caawiyaa inuu ka soo kabsado xogta aad ka iCloud ama Lugood si toos ah. Soo celinta iyo arkaysid fariimaha qoraalka ah la Wondershare Dr.Fone ee macruufka waa iska sahlan oo si fudud loo samayn karaa, kuwaas oo Jooji si degdeg ah oo sahlan
Marka hore, waxaad u baahan doontaa in ay dooranayaan habka soo kabsado ka soo kabsanaya gurmad iCloud ah, ka soo kabsado gurmad Lugood ama ka soo kabsado qalab macruufka ah.
Hadda, aad leedahay si aad u iskaan xogta aad tirtiray ama laga badiyay. Haddii aad doorashada ku jiray ka soo kabsado qalab macruufka ah ka dibna waxaad u baahan tahay in lagu xiro qalab macruufka ah si aad u computer ka dibna waxaad ka raadin kartaa macluumaadka aad u tirtiray ama laga badiyay. Haddii aad doorashada ku jiray ka soo kabsado gurmad Lugood ka dibna waxa ay ku siin doonaa fursad aad ku duuban gurmad Lugood ee PC iyo helaan macluumaadka aad u baahan yahay. Haddii aad doorashada ku jiray ka soo kabsado iCloud markaas u baahnaan doontaa inaad gasho in aad xisaabta iCloud ka dibna aad kala soo bixi kartaa iCloud gurmad file.
Xogta waxaa la kala saari doonaa in qaybaha iyo waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan in uu furmo natiijada. In galeeysid bidix, guji nooca file ka dibna waxaad awoodi doontaa in aad u aragto in aad / fariimaha tirtiray lumay ama wixii macluumaad kale. Marka aad heshid xog ah in aad raadineysay, hubi kuwa aad loogu baahan yahay, ka dibna si fudud riix 'kabsado' button in ay dib u helaan in xogta aad PC / qalab macruufka ah.
Sidaas hadda ka, uma baahnid in aad walwasho dambe ay dhacdo in aad iPhone lumo ama waxyeelo soo gaadho sababta oo ah aad u jiri doono ugu yaraan awoodaan in ay soo celin gurmad aad iPhone by iCloud on your computer oo ay nuqul ugu dambeeyay ee fariimaha qoraalka ah oo dhan. Haddii aad dooneysid inaad hesho farriimahan on your computer, waxaad iyaga si toos ah uga iCloud soo bixi kartaa iyadoo la kaashanayo 'Trans kasta oo' kaas oo ka kooban macruufka ah oo aad ku yeelan karaan gurmad iCloud iyo xogta aad u aragto.
Waxaa jira qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso inta ay taageerto kor u iPhone la iCloud. Bal aan eegno kuwa ugu sareeya
Ka dhig danbayntii ku xasuusta kaydinta iCloud
Cloud kaliya ayaa bixiya xasuusta 5GB loogu isticmaalo lacag la'aan ah si xisaabta bannaan ee xasuusta ku iCloud. Tan ugu muhiimsan, sii hubinaya camera oo duudduuban. Tusaale ahaan, telefoonada sida iPhone 4s iyo iPhone 5 kaamaro 8MP ah iyo sawiro ka soo saaray waa weyn ee size iyo qadarka images in aan ku sii telefoonada naga dhab ah u noqon kara la yaab leh si mar walba isha ku hay iyaga si kale u iCloud gurmad kaydinta on xusuusta ku dhawri doontaa helitaanka buuxin. Waxa kale oo aad gab karaa fursad u qaadey sida halka laga kordhinayo tayada sawiro aad, Doorashadan abuuraa laba nuqul ka mid ah sawirada iyo xataa buuxin kartaa ilaa xasuusta iCloud ayaa in ka badan ama xataa laga yaabee inaad qaar ka mid ah doorasho kaydinta duwan oo loogu talagalay sanamyadii. Tusaale ahaan, si fudud iyaga waxaad ku hayn kartaa in aad PC ama aad xataa ku haysan karto adeegyada sida WordPress, Flickr ama Google+ iwm weheliyo waxan oo dhan, waa in aad sidoo kale noqon carefull leh tirada ugu app tusaale ahaan, kulan culus sida xad daab II leeyahay size of 1.03GB.
Maamul xogta app
Sida app xogta aad waxaa sidoo kale xoojiyaa by iCloud, waa in aad maamuli app xogta aad u gurmad iCloud ah. Waayo, kanu, tag saldhigyada, ka dibna garaac guud ka dibna dooran tuubada maamuli kaydinta. Tani waxay ku tusi doono oo dhan Xeeladdii ay hindiseen xiran yihiin ID Apple aad. Waayo, ma jiro, waxaad u baahan tahay in ay doortaan iPhone iyo waxaad awoodi doontaa in aad aragto gurmad ugu dambeeyay. Tubada ku badhanka 'fursadaha gurmad' oo halkaas ka, waxaad dooran kartaa Chine in aadan rabin in gurmad oo waxaa loo soo jeestay karaa. Hadda, hoos u rogto oo markaas waxaad dooran kartaa ka u "tusi doono oo dhan barnaamijyadooda" iyo ka dibna aad sameyn kartaa barnaamijyadooda si fudud u dooro jiraan.
Delete fariimaha Text
Qof walba Soha oo diraya fariimaha qoraalka ah ama MMS ee iPhone laakiin haddii aadan soo reynaya in si joogto ah ka dibna waxaa laga yaabaa in dhibaato ah ayadoo ay abuureyso dib u telefoonka. Ka hor inta aan la abuuro gurmad ah, waxaad eegi kartaa app fariin iyo aad tirtiri kartaa dhammaan fariimaha in mar dambe ma aad u baahan tahay iyo si, marka aad la abuuro gurmad iCloud aad iPhone, waxaad yeelan doontaa gurmad ah oo yar yar.
> Resource > iCloud > Sidee si aad u eegto iyo soo celinta fariimaha qoraalka ah ka iCloud